နိုင်ငံသား Buba မှပေးစာ: လျှပ်စစ်စျေးနှုန်းမှတုံ့ပြန်မှု Dousing
အားဖြင့် Posted: မေလ Anokuru မတ်လ 29, 2014
အများပြည်သူဒိုမိန်းအတွက်အက္ခရာများမကြာသေးမီကနိုင်ဂျီးရီးယားတွင်သိသာထင်ရှားသောရှုထောင်ယူကြပြီအဖြစ်, ကသတ္တုတွင်းထည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီလမ်းကြောင်းသစ်ကိုတက်မြိန်ဖို့ရာဌာနထဲကထွက်မကျရမည်အကြောင်း - အထုံးစံအတိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယား၏စားသုံးမှုသည်. နိုင်ဂျီးရီးယားလျှပ်စစ်မီးစားသုံးသူတွေငါ့ပွင့်လင်းအက္ခရာ၏ရည်ရွယ်လက်ခံတဲ့သူများမှာ, နိုင်ငံသား Buba အားဖြင့် epitomized အဖြစ်, အဘယ်သူသည်လက်ရှိသံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်သည် (သူ့ရဲ့အမျိုးအစားသန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူ) နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့ post-ပုဂ္ဂလိကပိုင်ခေတ​​်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့စျေးနှုန်း၏.
ဒီအစိတ်အပိုင်းတစ်ဝိုက်ဖွယ်ရှိဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့တုံ့ပြန်မှု dousing ရည်ရွယ်, နှင့်နိုင်ငံသား Buba ၏မျက်စိမှကြီးမားသောအကြေးခွံကိုဖယ်ရှားဖို့.
ငါဖော်ပြရန်ခေါင်းစဉ်ကိုလျှောက်ထားရန်အတင်းအကျပ်မပြုရပါ၏, "နိုင်ငံသား", to your name due to the realisation that your expectations of what happens to pricing or rates of electricity supply isapure reflection of those being harboured by millions of other electricity consumers in Nigeria. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သင်ကပုံမှန်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားအထိမ်းအမှတ်, ထမြောက်တော်မူမျက်ခုံးလျှပ်စစ်အတွက်ပေးဆောင်ရမည့်နှုန်းထားကိုခန့်ဖြစ်ပေါ်လာရန်သည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြိုတင်မှန်းဆပုံဖော်ထားတဲ့နှင့်အတူ, ယခုမြင်သမျှကို run စွန့်စားမှုမျိုးဆက်နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းယူကြပြီ, အာဏာကိုကဏ္ဍ၏မကြာသေးမီကကောက်ချက်ချသည်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကြောင့်.
ဒါဟာစားသုံးသူတွေလျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားများအတွက်မည်သည့်တာဝန်ရှိသူတဦးကတိုးမှအများပြည်သူ retort မျှော်လင့်ရာဌာနထဲကထွက်မရ. ဤစာမှာညွှန်ကြားထားသည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်, ခရီးသွားရာတွင်-ပေါ်တွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဧကန်အမှန်အများပြည်သူနားလည်သဘောပေါက်ဘို့လုပ်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, နောက်ပိုင်းတွင်မည်သည့်ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ပြည်သူ့တုံ့ပြန်မှု douse. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနိုင်ဂျီးရီးယားစားသုံးသူဖြစ်ခြင်း, သင်သည်ဤစာပေးစာယူဖြတ်သန်းသွားအဖြစ်ငါသည်သင်တို့၏စိတ်တွင်အသွင်သဏ္ဌာန်ကိုယူဆောင်ဖွယ်ရှိမေးခွန်းတွေကတော်တော်လေးသတိပြုမိပါတယ်.
တစုံတယောက်ကိုသင်စိတ်တွင်ဤမေးခွန်းများရှိသည်ထွက်လုပ်ရ clairvoyant ဖြစ်နေစရာမလိုဘူး: (တစ်ဦး) မကြာမီကကနိဂုံးချုပ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရလဒ်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်မည်? (ခ) ဟုတ်တယ်ဆိုရင်, ထိုကဲ့သို့သောများအတွက်ညီညွတ်သောအရာဖြစ်တယ်? (က c) အဘယ်အရာကို ratepayers အပေါ်သက်ရောက်မှုလျော့ပါးစေရန်လိုအပ်သောအကြောင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, နှုန်းကိုတိုးပေါ်ပေါက်လျှင်? ဤမေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းခြင်းမပြုမီ, ငါနိုင်ဂျီးရီးယားဖောက်သည်လက်ရှိ ပတ်သက်. ညည်းညူသည်အဘယ်အရာကိုထောက်ပြလို (ဤအရပ်မှစျေးနှုန်း၏မည်သည့်အရိပ်အယောင် revulsion ဖြစ်ပေါ်စေတိုးမြှင့်), အခုအသစ်အမိန့်သည်ငါတို့အဘို့ရရှိထားသူအရာကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူလက်ရှိရရှိသွားရာပေါ်အလင်း၏စာရေးပစ်မှတဆင့်, စားသုံးသူများ.
ပိုးတောင်မာ, ငါသည်သင်တို့ကိုအောက်-ထောက်ပံ့သောထုတ်ကုန်များအတွက်ဆပ်ဖို့လူတွေကိုတောင်းဆိုနည်းနည်းခက်ခဲကြောင်းနာ​​းလည်သဘောပေါက်မယ်လို့မျှော်လင့်, လျှပ်စစ်ပါဝါအခုအချိန်မှာဖြစ်သကဲ့သို့? ၎င်းသည်နိုင်ဂျီးရီးယားအိမ်ထောင်စုများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတည်ထောင်လျှပ်စစ်မီးငတ်ဖြစ်ကြောင်းမရှိတော့သတင်းဖြစ်သည်. လျှပ်စစ်ပါဝါဈေးကွက်တွင်ပုံမှန်နိုင်ဂျီးရီးယားဖောက်သည်, အခြား climes သူများနှင့်တူ, အတော်လေးအခြေခံကျနေသောနှစ်ခုအခြေခံပညာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိနေသည်, နှင့်ဦးစားပေးအမိန့်ပေး – ထောက်ပံ့ရေးလုံခြုံရေး, နှင့်စျေးနှုန်း. ကျနော်တို့ဒီမှာနာက်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိ, ဖြန့်ဝေသောကွန်ယက်အာဏာအရည်အသွေးပေါ် expatiating နေစဉ်ဒီစီးရီးအတွက်အစောပိုင်းကခေါင်းစဉ်ထောက်ပံ့ရေးကိစ္စကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမူသည်အတိုင်း.
အသစ်အမိန့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်လက်ရှိရရှိထားသူအဘယ​​်သို့သောသို့ delving မပြုမီ, ငါမှတ်မိဖို့သင်နေစဉ်လျှင်ငါ့တဘက်၌ကမကိုင်ပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး, "မေးခွန်းတိုင်းမှ, မျက်နှာပြင်အဖြေကိုတစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းသူတယောက် "လည်းမရှိ. စျေးနှုန်းပေါ်မှာသင့်ရဲ့မေးခွန်းကိုပိုမိုလေးနက်အဖြေကိုကိုယ့်လစဉ်လျှပ်စစ်မီးငွေတောင်းခံတွင်ပါဝင်သောသူတို့သည်လည်းထိုနှုန်းထားများသို့မဟုတ်စွဲချက်ပြဌာန်းကားအဘယ်သို့. ပိုးတောင်မာ, ဒီမမေ့မလြော့ပါ – သင့်ရဲ့လစဉ်ဥပဒေကြမ်းကို (လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသို့မဟုတ်၏သုံးစွဲမှုအတွက်ဥပဒေကြမ်းအရာဖြစ်၏) နှစ်ခုအပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်:
(တစ်ဦး) စွဲချက် (မကြာခဏ tagged စွမ်းအင်ကိုတာဝန်ခံ) လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုအပေါ်ကိုအခြေခံပြီး (ကီလိုဝပ်နာရီတွင်သို့မဟုတ် kWh) လတစ်လအတွင်းအိမ်ထောင်စုသို့မဟုတ်စီးပွားရေးအားဖြင့်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့. ဒါဟာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်တာဝန်ခံလည်းပါဝင်သည် (လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖို့); လျှပ်စစ်ထုတ်လွှင့်မှုစနစ် operating နှင့်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်စွဲချက် (လျှပ်စစ်လိုင်းကနေတဆင့်ထုတ်လွှင့်); သင့်အိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးမှဖြန့်ချိလိုင်းများကိုကျော်လျှပ်စစ်မီးရွေ့လျားအတွက်ဝန်ဆောင်ခ (သင့်ဒေသအတွင်းတွင်ဖြန့်ဝေ); နှင့်ရောင်းချမှုအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (သင်ကရောင်းချနေ၏အုပ်ချုပ်ရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကုန်ကျစရိတ်များ).
(ခ) တစ်ဦးကအငယ်စားလျှပ်စစ်ဓာတ်ကောက်ခံခြင်း (မကြာခဏ fixed monthly ကိုတာဝန်ခံအဖြစ်ရည်ညွှန်း, ဝန်ဆောင်ခသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်ခ). ဒီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငွေတောင်းခံဘို့အကု သ. မရသော, မီတာစာဖတ်ခြင်း, ဝန်ဆောင်မှုခေါ်ဆိုခတုန့်ပြန်, ဝန်ဆောင်မှုလိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အသစ်သုံးစက်ကိရိယာများကို installation.
နိုင်ငံသား Buba, သင်တို့ပင်ထိုအတူလစဉ်ကာလအတွင်းသင့်အိမ်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းဥပစာတွင်တဦးတည်း kWh ပျက်မဆုံးဖြတ်ရမည့်အခြေအနေတစ်ရပ်အတွက်ကြောင့်သတိပြုရန်, (တစ်ဦး) အထက်သုညဖတ်တယ်, စဉ် (ခ), ကလအတွက်ဝန်ဆောင်ခ, ဖောက်သည်များသင်တို့၏အမျိုးအစားမှပေးကြအဖြစ်, သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဆန့်ကျင်ကြေညာတဲ့ရုပ်ကြွင်း. နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကိုအစဉ်မပြတ်ငွေတောင်းခံဖြစ်စဉ်တွင်ဝန်ဆောင်မှုတာဝန်ခံ၏အယူအဆသာဒီနေရာမှာသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဟူသောသိထားရမယ် (မ '' နိုင်ဂျီးရီးယားအရာ ''), ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာ၏အခြားဒေသများတွင်ရရှိသွား. ဒီ verify လုပ်ဖို့ Free ကျေးဇူးပြု.. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံ parlance အားဖြင့် Going, ဝန်ဆောင်ခက "သေချာဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်" ဖြစ်ပါတယ်.
အာဏာကိုကဏ္ဍ၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်မည်သည့်နှုန်းထားကိုတိုးစေ၏ရှိမရှိပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်, အဖြေ 'ဟုတ်ကဲ့' ပဲဖြစ်တယ်. ပြု, ဒါပေမယ့်နိုင်စွမ်း. တစ်ဦးကစျေးနှုန်းစစ်အစိုးရ၏နိဒါန်းအဘို့အလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဘက်စုံတစ်နှစ်တာ Tariff အမိန့် tagged (လမ်းအသုံးပြုခ), နိုင်ဂျီးရီးယားလျှပ်စစ်ဥပဒေဆိုင်ရာကော်မရှင်သို့မဟုတ် NERC အားဖြင့်အရပ်ဌာန၌သွင်းထား. ဒါဟာဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျှပ်စစ်မီးကုန်ကျစရိတ်ပြဌာန်းခွင့်တောင်းလာရန်ရည်ရွယ်သည် (နှင့် retail) ဇွန်လတို့မှကုမ္ပဏီများကို 1, 2012 မေလ 31, 2017. တစ်မ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရအတွက်, MYTO မပါဘဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကဤကဏ္ဍတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှကျယ်ပြန့်အိပ်စင်ပေးပြီဟုပြောဆိုသော, နှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်လေ့ကျင့်ခန်း Edgar မှာဖြစ်ရပြီလို, အနိမ့်စျေးနှုန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ပြန်လည်နာလန်ထူရုပ်သိမ်းမည်မဟုတ်ပါအဖြစ်. ပိုမို, ပိုးတောင်မာ, ငါသည်အ NERC ရဲ့ web site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသင်တို့ကိုတိုက်တွန်း. (ဆက်ရန်)
1 မှတ်ချက် အပေါ် "နိုင်ငံသား Buba မှပေးစာ: လျှပ်စစ်စျေးနှုန်းမှတုံ့ပြန်မှု Dousing"
jovie | ဇွန်လ 9, 2014 တွင် 2:18 ညနေ | ပြန်ကြားချက်